Antananarivo sy Toamasina Mitombo isa hatrany ireo marary
Nohamafisin’ny CCO Covid-19 tamin’ny alalan’ny Mpitondra teniny dia ny Pr Vololontiana Hanta ny fahafatesan’ilay teratany Filipianina Ryan Reyes tao Ambatovy.
Notsaboina tao amin’ny Hopitalin’Ambatovy, nanaraka ny fitsaboana tao fa tsy nanaraka ny paipaikam-pitsaboana na ny “protocole” antsika Malagasy izay misy ny CVO izy, hoy ny Pr Vololontiana Hanta. Mitombo hatrany kosa ny olona voa. Fitiliana 61 no natao ny 18 mey, ka 34 tany Toamasina ary 27 teto Antananarivo, izay nahitana tranga 4 ka 2 avy ho an’ireo tanàn-dehibe roa ireo. 326 amin’izao fotoana izao no fitambaran’ireo voa rehetra, ka 207 ny olona mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana izao. Efa mihatsara ilay “forme grave” tao Anosiala, ka tsy hampiasana “oxygène” intsony. Ilaina hatrany ny fitandremana mafy sy ny fanajana ireo fepetra maro napetraka. Rehefa mahita olona eny an-dàlana dia mametraka andraikitra, ka raha misy olona marary sendra safotra, fanina, sempotra na mikohaka, dia aoka hajaina ny maha olona ilay marary, hoy ny Pr Vololontiana Hanta. Tsy voatery ho covid-19 ny trangan’aretina rehetra. Tsy tokony hitangoronana izy, tsy tokony halaina sary,… Ireo mahay ny resaka vonjy aina no tokony ho eo. Raha voatery tsy maintsy maka sary, dia mba takomy ny tarehiny. Raha tena ahiana sy misy soritr’aretina, dia efa misy ny laharana azo antsoina. Arovana ihany koa ireo olona mifampikasoka, ary izay no tsy tokony hitangoronana,… hoy ny fanentanana avy amin’ny Pr Vololontiana Hanta.